theZOMI: [mrsorcerer:37622] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တန်ခူးကို နေရာမှန်ပြန်ပေးကြပါ - ဇော်ဝင်းကို
[mrsorcerer:37622] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တန်ခူးကို နေရာမှန်ပြန်ပေးကြပါ - ဇော်ဝင်းကို
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] တန်ခူးကို နေရာမှန်ပြန်ပေးကြပါ - ဇော်ဝင်းကို
by Nay Myo (Notes) on Tuesday, March 19, 2013 at 9:35pm
ဒီလမဂ္ဂဇင်းတွေ ထွက်လာတော့ ကျွန်တော့်ထုံးစံအတိုင်း ကဗျာတွေကို စဖတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ငယ်ချစ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တုံးခုလို့လှမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ "မမှီတဲ့ပန်း" ကိုး။ အနုပညာကြေးမုံ မဂ္ဂဇင်းကို ကိုင်မိတော့ ဧည့်ခံကဗျာကဏ္ဍမှာ "နဘေနဲ့ ရှင်မ" တွေ့တာနဲ့ မောင်ခိုင်မာပဲဆိုပြီး (သံယောဇဉ်လည်း ရှိတာကြောင့်) တစူးတစိုက် ဖတ်ကြည့်မိလိုက်ရဲ့။ ထင်တဲ့အတိုင်း မောင်ခိုင်မာပါ။ "တပေါင်းလအယ်လ်ဘမ်"…တဲ့။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကို ဖွဲ့ထားတဲ့ကဗျာပါ။ နောက်ဆုံးပိုဒ်မှာ …..
ရှင်မ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့စေသတည်း။ …… တဲ့။
အောက်မှာလည်း (၁၉၄၅ - မတ်လပုံရိပ်) လို့ ညွှန်းထားသေးရဲ့။
(အနုပညာကြေးမုံမဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ စာ­­­­‑၉)
ကဗျာကဖတ်ပျော်ပါတယ်။ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ စူးစူးနစ်နစ်ဖြစ်သွားတာက "တပေါင်း" ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ပါ။ အနားမှာရှိနေတဲ့ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန်ကို ကောက်လှန်လိုက်တော့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ဟာ "၁၃၀၆ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်" တဲ့။ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အခုရေးမိတာက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲတဲ့အချိန်ကာလကို တပေါင်းလလို့ ကိုခိုင်မာက ရေးလိုက်တာကြောင့် ကိုခိုင်မာကို တိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ မောင်ခိုင်မာရဲ့ အချိန်သတ်မှတ်ချက် မှားသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ရင် မောင်ခိုင်မာ့ကို လက်တို့ပြီး "ကိုခိုင်မာရေ…..ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုတွေ့လို့ ဒီလိုထင်မိတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားသဘောကရော ဘယ်လိုရှိလဲ" ဆိုပြီး နှစ်ကိုယ်ချင်း ရှင်းလိုက်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အချိန်သတ်မှတ်ချက် မှားသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိရုံနဲ့ မောင်ခိုင်မာ့ကဗျာရဲ့ လေးနက်လှပမှုဟာ လုံးဝပျက်ဆီးသွားတာမှ မဟုတ်တာ။
ကျွန်တော်ရေးချင်တာက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနဲ့ တပေါင်းသြဇာ အကြောင်းပါ။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးလို့ ဆိုလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်ထဲမှာ "တပေါင်း" လို့ စွဲမြဲနေကြတယ်။ တပေါင်းလအကြောင်း စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်း ဖတ်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆိုတာ ချက်ချင်း ပေါ်လာတတ်တယ်။ မောင်ခိုင်မာ တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမတ်လထဲမှာ ထွက်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ တခြားသူတွေလည်း ဒီလိုပဲရေးကြတာပါပဲ။ အထူးအထွေ အားထုတ်ရှာဖွေတာ မဟုတ်ဘဲ လက်တစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ၃-၄ အုပ်ကို ကောက်လှန်လိုက်ရင်တောင် တွေ့ပါတယ်။
ဟော - မတ်လထုတ် "စိန်ခြယ် မဂ္ဂဇင်း" တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ စကားမှာ "ဂုဏ်ယူပါတယ် အို တပေါင်း" တဲ့။
တပေါင်း၏အတိတ်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အရိပ်ပမာ ထာဝရ ခိုအောင်းတွယ်ကပ်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုတပေါင်းလ၏ အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်သော "တော်လှန်ရေး" အသွေးအရောင်သည် ယနေ့ နှစ် (၅၀) ပြည့် ရွှေရတုသို့ပင် ရောက်ခဲ့သော်ငြားလည်း မမေ့နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ထိုအချိန်က ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၊ အပင်ပန်း အဆင်းရဲခံကာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသော မြန်မာမျိုးချစ်သူရဲကောင်း အာဇာနည်များအား လေးစားဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ …….. တဲ့။
(စိန်ခြယ် မဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ စာ-၄)
နောက် . . . . မတ်လထုတ် "ရုပ်ရှင်သစ္စာ မဂ္ဂဇင်း" မှာ မောင်သင်းမြရဲ့ ကဗျာက "တပေါင်း. . . နွေ" တဲ့။
အော် . . . ရွက်ကြွေတောအကြောင်း
ဥသြပြန်ပြောင်းပြောတကား။ ။ . . . . တဲ့။
(ရုပ်ရှင်သစ္စာ မဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ စာ-၄)
ကဲ . . . ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆို တပေါင်း၊ တပေါင်းဆို ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစွဲလေ။
တပေါင်းနဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆက်စပ်ခဲ့တာ အခုနောက်ပိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၁၉၄၆-၄၇ လောက်ကတည်းက စာဆိုတွေရဲ့ ကဗျာတွေမှာ တပေါင်းနဲ့ တော်လှန်ရေးကို တစ်ထပ်တည်း ရေးခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ အို . . . နောက်ဆုံး ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ စာစီစာကုံးတွေအထိ "တော်လှန်ရေးနဲ့ တပေါင်း၊ တပေါင်းနဲ့ တော်လှန်ရေး" ထွေးလုံးရစ်ပတ်ပါပဲ။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအကြောင်း ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်က "တပေါင်း" တဲ့။ မတ်လ တော်လှန်ရေးနှစ်ပတ်လည် ရောက်ပြီဆိုရင် "တပေါင်းအားမာန်" ဆိုတဲ့ ကဗျာမျိုးတွေ ပလူပျံလို့။
ကလေးတွေကို စာစီစာကုံးရေးခိုင်းပြီ ဆိုရင်လည်း တပေါင်းလအကြောင်း ရေးရပြီဆိုရင် "ဤသို့ ရွက်ဟောင်းကြွေ ရွက်သစ်ဝေသည့် တပေါင်းလတွင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူများသည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါလား" ဆိုတာမျိုးဟာ မပါမပြီး။ သတင်းစာပင်တိုင် ဆောင်းပါးတွေ၊ သတင်းစာခေါင်းကြီးတွေတောင်မှ မလွတ်ပါဘူး။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအကြောင်း ပြောပြီဆိုရင် တပေါင်းကတော့ ပါလာလေ့ရှိတယ်။ တန်ခူးက ဘယ်ရောက်နေလဲ။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ကို ကြေညာတာကသာ မတ်လ (၂၇) ရက်သာ ဖြစ်တာ၊ ပြင်ဆင်တာက အစောကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်မှာပါလို့ တွေးရင်လည်း ဒါဟာ တမင်အကြောင်းပြတာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုတာ မတ်လ (၂၇) ရက်လို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တညီတညွတ်တည်း သဘောတူထားပြီးပြီကိုး။ ဖက်ဆစ်ကိုစတင်တော်လှန်ဖို့ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် တပ်ဖျောက်ဖို့စီစဉ်ကြတာလည်း မတ်လ (၁၇) ရက်ဆိုတာ တန်ခူးလဆန်း (၅) ရက်နေ့ ကျပါတယ်။ အခုတော့ တန်ခူးက လုံးဝပျောက်နေတယ်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအကြောင်း ရသစာပေအနေနဲ့ ရေးကြဖွဲ့ကြပြီဆိုရင် တန်ခူးက လုံးဝပါမလာတော့ဘူး။
အခု ကျွန်တော်ရေးနေတာ အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၊ ပဲစေ့သွန်ကောက်ပြီး မရောင်ရာဆီလူးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာ ကျွန်တော်ကိုးကားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အသေးအဖွဲအမှားလေးတွေကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး သူတို့လက်ရာကောင်းတွေကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားတယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့သာ မှားတာမှမဟုတ်ဘဲ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် တော်တော်များများ မှားခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် တပေါင်းသြဇာ ဘယ်လိုလွှမ်းလာတယ်ဆိုတာ ခြေရာခံရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆင်ခြင်ပုံအားနည်းချက်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ ကြိုးစားတာပါ။ ပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အောက်ပါအတိုင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကျွန်တော်ဟာ ယုတ္တိနည်းကျ ဆင်ခြင်မှုမရှိသူဖြစ်တယ်။
ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်လိုက်ရင် မတ်လရဲ့အစဟာ တပေါင်းလဖြစ်တတ်တာ များပါတယ်။ ဒီတော့ ပြက္ခဒိန် ကြည့်လိုက်တိုင်း မတ်လဆိုတာ တပေါင်းပဲလို့ ကောက်ချက်ဆွဲထားမိပါတယ်။ တကယ်က မတ်လရဲ့ တချို့တစ်ဝက်သာ တပေါင်းဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့တချို့တစ်ဝက်ကတော့ တန်ခူးဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ မတ်လရဲ့ အစတိုင်းဟာလည်း တပေါင်း အမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံ တပို့တွဲနှောင်းရက်များ ဖြစ်တတ်သေးကြောင်း၊ မြန်မာလနဲ့ အင်္ဂလိပ် (ကမ္ဘာသုံး ဂရီဂိုရီယန်ပြက္ခဒိန်) လတွေဟာ တစ်ထပ်တည်းမကျတတ်ကြောင်းစတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
ယုတ္တိဗေဒမှာ "အကြွင်းရှိ အဟုတ်အဆိုတစ်ခုနဲ့ အကြွင်းမဲ့ အဟုတ်အဆိုတစ်ခုကြားမှာ အောက်အလှည့် ဆက်နွယ်မှုသာ ရှိတယ်" (Onlyasubaltern relation exists betweenaParticular affirmative proposition andaUniversal affirmative proposition) ဆိုတဲ့ ဥပဒေသ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ "မတ်လ၏ ရက်အချို့သည် တပေါင်းလ၏ ရက်အချို့ဖြစ်သည်" ဆိုတဲ့ အကြွင်းရှိ အဟုတ်အဆိုကနေ "မတ်လ(တစ်ခုလုံး)သည် တပေါင်းလ(တစ်ခုလုံး) ဖြစ်သည်" ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ကို မဆွဲနိုင်ပါဘူး။ ဒီအဆိုနှစ်ခုရဲ့ ဆက်စပ်မှုဟာ တစ်ခုမှားရင် ကျန်တစ်ခုက လိုက်မှားပေမယ့် တစ်ခုမှန်ရင်တော့ ကျန်တစ်ခုဟာ မှန်/မမှန် တထစ်ချမပြောနိုင်တဲ့ အောက်အလှည့် ဆက်နွယ်မှု (subaltern relation) သာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတ်လရဲ့ ရက်အချို့ဟာ တပေါင်းလဖြစ်ရုံနဲ့ မတ်လဟာ တပေါင်းလဖြစ်တယ်လို့ တိုက်ရိုက်ကောက်ချက်ဆွဲမိတာဟာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုအနက်က တစ်ခုကိုသာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့အမှား (The fallacy of affirming an alternant) ကို ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်မှာ အခြေခံကျတဲ့ ယုတ္တိဗေဒ ဆင်ခြင်မှုတောင် မရှိဘူးဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်လိုက်မိပါတယ်။
၂။ ကျွန်တော်ဟာ သင်္ကေတအစွဲကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
လူ့လောကမှာ အထူးသဖြင့် စာပေအနုပညာနဲ့ ခံစားမှုနယ်ပယ်မှာ သင်္ကေတတွေဟာ အတော်လွှမ်းမိုးပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းလာ နောဧလှေပေါ်က လွှတ်လိုက်တဲ့ ချိုးငှက်ဟာ ပီကာဆိုကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတ ဖြစ်လာတယ်။ အလုပ်သမားလက်ထဲက တူ၊ လယ်သမားသုံး တံစဉ်တို့ဟာ အဖိနှိပ်ခံများရဲ့ လွှတ်မြောက်ရေးသင်္ကေတ ဖြစ်လာတယ်။ ယုဒရှကာရုတ်ရဲ့ အနမ်း၊ အာခိလိရဲ့ ဖနောင့်၊ လောကနတ်ရုပ်တု၊ . . . ။ အရှိတရားတွေကိုစုစည်းဖော်ပြတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုကို ပါရမီရှင်တစ်ဦးကဖန်တီး၊ ဒီသင်္ကေတက လူများရင်ထဲစိမ့်ဝင်သွား၊ နောက်တော့ ဒီသင်္ကေတ မြင်လိုက်ရင်ပဲ သူကိုယ်စားပြုတဲ့ တရားကိုယ်သဘောတွေကို ချက်ချင်းခံစားလိုက်ရ . . . ။ ဒဂုန်တာရာရဲ့ "ဆိတ်ဖလူးရနံ့" ကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ထိရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
ဒီတော့ ခံစားမှုနယ်ပယ်မှာ သင်္ကေတတွေဟာ အင်မတန်ထိရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ တရားကိုယ်သဘောကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ အဲဒီတရားကိုယ်သဘောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေ ရင်ထဲမှာ တဖွားဖွားပေါ်လာနိုင်တယ်။ တစ်ခါခါ သင်္ကေတဟာ သူမူရင်းကိုယ်စားပြုတဲ့ တရားကိုယ်သဘောနဲ့ လွတ်သွားတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ကေတကို စွဲမက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သူ အဖို့တော့ ဒီသင်္ကေတရဲ့အစွဲကြောင့် နဂိုတရားကိုယ်သဘောကိုပဲ ဆက်ပြီး ခံစားနေရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် သင်္ကေတကိုအလွဲသုံးမှုတွေ ဖြစ်လာရော။ သင်္ကေတစွဲ ကြီးသူတွေကလည်း ပြောင်းလဲသွားတဲ့အနှစ်သာရကို မမြင်နိုင်ဘဲ သင်္ကေတအစွဲနဲ့ တစ်ခုလုံးကို လက်ခံမိရော၊ တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ သင်္ကေတတစ်ခုဟာ အရေးကိစ္စတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာချက် အားလုံးကို မခြုံငုံမိဘဲ တချို့သော လက္ခဏာချက်ကိုသာ ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ကေတစွဲ ကြီးသူတွေဟာ အဲဒီသင်္ကေတကြောင့် လက္ခဏာချက်အားလုံးကို လက်ခံမိတတ်ကြတယ်။
ခု . . . တပေါင်းနဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ တပေါင်းဆိုတာ ဆောင်းက နွေကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရွက်ဟောင်းကြွေပြီး ရွက်သစ်ဝေခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း ပြင်းပြတဲ့နွေကို ပုရစ်နုတွေက အန်တုခြင်း . . . စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေလေတော့ "တပေါင်းဟာ ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့သရုပ်၊ အန်တုခြင်းရဲ့ သရုပ်" လို့ စွဲမက်မိရော။ ဒီတော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလဟာ တပေါင်းလမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သင်္ကေတအစွဲနဲ့ ဆန်းစစ်မှုမရှိဘဲ လက်ခံလိုက်တာပါပဲ။
၃။ ကျွန်တော်ဟာ သိုးစိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်။
အားငယ်ကြောက်ရွံ့တတ်သူ၊ ခေါင်းငုံ့နာခံတတ်သူဆိုရင် "သိုးငယ်လေးလိုပဲ" လို့ ခိုင်းနှိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သိုးဆိုတာ ကြောက်တတ်တဲ့သတ္တ၀ါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် တိုက်ခိုက်ကြပြီဆိုရင် အသေအကျေတိုက်တတ်တဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သိုးအုပ်စုမှာ ရှေ့ဆုံးကတစ်ကောင်ကို ဆွဲခေါ်လိုက်ရင် နောက်ကအကောင်တွေကလည်း စီတန်းလိုက်တတ်ကြတဲ့အတွက် သိုးဆိုတာ ခေါင်းငုံ့နာခံတတ်တယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ကြတာပါ။ အသေအချာစဉ်းစားကြည့်တော့ သိုးတွေဟာ ကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင်ဥာဏ် မရှိတာပါ။ သိုးတစ်အုပ်မှာ ရှေ့ဆုံးတစ်ကောင်ကိုသာ ဆွဲခေါ်သွား . . . ရှေ့မှာ အဲဒီအကောင်ကို သတ်နေရင်လည်း နောက်ကသိုးတွေကတော့ ဆက်လိုက်နေကြတာပဲ၊ စဉ်းမှ မစဉ်းစားဘဲကိုး။
တကယ်တော့ သိုးငယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ကျွန်စိတ် (slavishness) ပါပဲ။ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အစဉ်အလာသတ်မှတ်ချက်အရ တပေါင်းဟာ တော်လှန်ရေးလလို့ သိလိုက်ရတယ်။ "အားလုံးက ဒီလိုသတ်မှတ်ရင် ငါလည်း ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်ရမှာပေါ့" ဆိုပြီး လက်ခံလိုက်တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိသီးခြားအဖြစ် (individual identity) ကို မထူထောင်နိုင်တာပါ။ အများထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ အများထဲမှာပဲ စီးမျောသွားတာပါ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ တာဝန်မယူရဲတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ "အစဉ်အလာ အစဉ်အဆက် လက်ခံကြသည်ဟုလည်း မယုံကြည်နှင့်" ဆိုတဲ့ ကာလာမသုတ်လာ သြ၀ါဒကို ကျွန်တော်နာဖူးတယ်။ "နေရောင်အောက်မှာရှိတဲ့ အရာမှန်သမျှကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရမယ်" ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း ကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကြုံလာတော့ စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲ အစဉ်အလာအယူအဆကို "သိုးစိတ်" နဲ့ လက်ခံခဲ့တာပါပဲ။
"တပေါင်းသြဇာ" အောက်က ကျွန်တော်ဟာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ အမှားကြီးသုံးရပ်ကို ကျူးလွန်မှောက်မှားခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အတွက် တပေါင်းသြဇာကို ကျွန်တော်လက်ခံဖို့ ရင်မရှင်းတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ "တပေါင်းသြဇာ" ဟာ ယုတ္တိဆင်ခြင်မှု ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ သြဇာ၊ သင်္ကေတစွဲကြီးမှုရဲ့ သြဇာ၊ သိုးငယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ သြဇာပါပဲ။ "မိမိကိုယ်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်ရင် လောကတစ်ခုလုံးကို မြင်ရတယ်" ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်ရင်းနဲ့ လောကတစ်ခုလုံးကို လျှပ်တပြက်မြင်လိုက်မိသလိုရှိရဲ့။ "တပေါင်းသြဇာ" လွှမ်းခဲ့ကြသူတွေထဲမှာ အလေးအနက်ထားလောက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ လေးစားဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်း ပါဝင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့မှာတော့ တပေါင်းသြဇာကို လက်ခံခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိကောင်းရှိကြမှာပါ။ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် သိချင်စမ်းပါဘိတယ်။
အကြောင်းထူးမရှိရင်တော့ . . . .
တန်ခူးကို နေရာမှန် ပြန်ပေးစေ့ချင်ပါတယ်။
(ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် - ၅၈၊ မေလ၊ ၁၉၉၅)
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/20/2013 12:36:00 PM